नेकपा विवाद : गौतमलाई राष्ट्रियसभामा र खतिवडालाई मन्त्रीमा निरन्तरता मध्यमार्गी उपाय « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, १६ फागुन । बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण नेकपामा बढेको विवाद तत्कालका लागि ‘मत्थर’ हुने भएको छ ।
सचिवालय बैठकको निर्णय अवज्ञा गर्दा थप संकट झेल्नुपर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘मध्यमार्ग’ प्रयोग गर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । तर, यो मध्यमार्ग नेकपाभित्र चलिरहेको शक्ति संघर्षको अस्थायी समाधान मात्रै हो ।
सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने भन्ने दबाबमा परेका ओली अन्ततः ‘मध्यमार्गी’ उपाय अपनाउन तयार भएको बताइन्छ ।
जसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने छ भने डा. खतिवडा कम्तीमा थप ६ महिना अर्थमन्त्री नै रहनेछन् ।
शुक्रबार चितवन पुगेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विश्वाससहित खतिवडालाई अर्थमन्त्री कायम राख्ने ओलीको चाहना पनि सम्बोधन गर्न सकिने संकेत गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै फागुन २१ गते खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गर्ने विकल्पमा ओली सहमत भएको बताइन्छ ।
संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक प्रावधान अनुसार पुनः अर्थमन्त्री बन्ने खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने छन् ।
६ महिने अवधि सकिने बेलामा राष्ट्रियसभाका कुनै एक सदस्यलाई राजीनामा गराएर खतिवडालाई पुनः सांसद बनाई अर्थमन्त्रीमै निरन्तरतासमेत दिन सकिने छ । तर, खतिवडालाई बजेट ल्याउन दिएर बिदा गर्नुपर्ने मत नेकपामा बलियो छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भएपछि गौतमलाई सरकारमा प्रवेश गराउने कसरत हुने नै छ । त्यसबेला पनि ओलीले चर्को दबाब खेप्नु पर्ने छ । गौतम उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारमा भित्रने निश्चित भयो भने हाल दोस्रो बरियतामा रहेका रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ ।
त्यसो हुँदा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट अर्का विश्वासपात्र गुमाउनु पर्ने छ । त्यसैले गौतम र खतिवडा दुवैलाई अघि सार्ने अहिलेको मध्यमार्गी उपाय नेकपाभित्र चलिरहेको शक्ति संघर्षको अस्थायी समाधान मात्रै हो ।
बाँकेमा कोरोनाबाट थप एक जनाको मृत्यु, नेपालमा काेराेनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या २० पुग्यो
सप्तरी, ३ असार । बहुविवाहको आरोपमा सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिका–९ देउरीका २७ वर्षीय विश्वनाथ साहलाई प्रहरीले
नेपालगञ्ज, ३ असार । बाँकेमा कोरोनाबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाकी ४५